Maanta xilli ciyaareedkii labaad ee soo ifbaxa Dickinson ee TV-ga Apple + | Waxaan ka socdaa mac
Dickinson Xilligiisii ​​XNUMX-aad ee kasoo muuqday Maanta TV-ga Apple +
Dickinson Waxay ka mid ahayd taxanihii ugu horreeyay ee aan ka arko Apple TV + markii la siidaayay barxadda, wax yar ka hor sanad ka hor. Toddobaadka dhexdiisa aniga iyo gabadhaydu keligay baan wax ku cuneynaa guriga, waana qasabnay, waa inaan daawadaa taxanaha inta aan jikada wax ku cuneyno. Runtuna waa inaan aad uga helay.
Hadduusan ilmahaygu ahayn, anigu ma aanan arkeen, maxaa yeelay filimada guridda iyo silsiladaha dambe ma ahan dharkeyga adag. Hadda, waxaan bilaabi doonnaa inaan aragno xilli labaad. Markanna, qasab kuma samayn doono, laakiin waxaan ku iri ikhtiyaar ikhtiyaar ah.
Horeba waa loo heli karaa gudaha Apple TV + saddexda qaybood ee ugu horreeya xilli-ciyaareedkii labaad ee taxanaha 'Dickinson', oo si aad ah ugu guulaystay bilawgii barxadda, dib ugu soo noqoshada Nofeembar 2019, markii aan u malaynay in waji-xidheennada loogu talagalay oo keliya dhakhaatiirta qalliinka.
Xilligan cusub waxaa lagu dhawaaqay Oktoobar 2020. Dickinson waa riwaayad qosol badan qarnigii XNUMXaad oo ay jileyso Hailee Steinfeld oo ah gabyaa da 'yar Emily Dickinson.
Qeybtan labaad, Emily waxaa laga saaray nolosheeda suugaaneed ee gaarka loo leeyahay waxaana lagu riixay nolosha dadweynaha, maadaama ay la halgameyso dareenka ah in raadinta sumcadda ay u noqon karto ciyaar khatar ah iyada.
Jilayaasha yaa ayay bilaabeen Serie-ka. Ku soo noqoshada goobta waxaa ka mid ah Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss iyo Adrian Blake Enscoe, iyo sidoo kale heesaha caanka ah ee adduunka, heesaha iyo qoraa Wiz Khalifa, oo ku soo laaban doona dabeecadda Geerida.
Xilli ciyaareedka labaad ayaa sidoo kale soo muuqan doona mid cusub xiddigaha martida, oo ay ku jiraan Nick Kroll oo loo yaqaan Edgar Allan Poe, Timothy Simons oo loo magacaabay Frederick Law Olmsted, Ayo Edebiri oo loo yaqaan Hattie iyo Will Pullen oo aan cidna ahayn. Sidii hore loo shaaciyey, xiddigaha martida ee soo noqnoqda xilli-ciyaareedka labaad waxaa ka mid ah Finn Jones oo loo yaqaan 'Sam Bowles' iyo 'Pico Alexander' oo ah Markab.
Apple waxay kaloo shaacisay inay jiri doonto a xilli saddexaad taxanaha. Qoraallada waa la dhammeeyaa, dhawaana wuxuu bilaabi doonaa toogashada. Hada, aan ku raaxeysano qaybtan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Dickinson Xilligiisii ​​XNUMX-aad ee kasoo muuqday Maanta TV-ga Apple +
Apple Pay ayaa dhawaan heli doonta dadka isticmaala Faransiiska ee kaarka gaadiidka Smart Navigo